Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali nitaky nitranga in-1 : Nihetsika avy hatrany ireo fikambanana mpiaro ny Zon'Olombelona raha nahare ny vaovao ka nitaky ny famotsorana ireo bilaogera voampanga. Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy Taolagñaro nitranga in-2 : atoa Bill no mitatitra ao amin'ny gazety Madagascar Tribune ny rotaka izay nanery ny fitsaharanasa tao amin'ny orinasa QMM any Taolagñaro [fr] nanomboka tamin'ny Alakamisy faha Janoary lasa teo: les activités de la société QMM qui extraie l'ilménite à Fort Dauphin sont depuis ce jeudi 10 janvier fortement perturbées par une manifestation de foule.
Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy facebook nitranga in-4 : Mpanoratra Sana Saleem · Nandika Mamisoa · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra 0 Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila nampiharana nitranga in-1 : Ho fampivoarana ny miralenta indrindra no antom-pisian'ny atrikasa nampiharana ny drafitrasa kaonfederaly notontosain'ny Sekrima nandritra ny roa andro, nifarana ny sabotsy teo. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila sazian' nitranga in-1 : Ireo zaza tsy ampy taona no maro voakasik'ity fizahantany sazian'ny lalàna ity ao an-toerana.
Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc hitantara nitranga in-1 : Nampiasa ny media sosialy ireo mpikatroka Hazara taloha mba hisarika ny sain'ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena hitantara sy hitatitra ny zava-misy. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina nitranga in-1 : Irfan Ali, nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny herisetra manavakavaka tao Islamabad, Septambra Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila nokotrehy nitranga in-1 : Rakikira voalohany, izay nokotrehin'ny tarika tao anatin'ny dimy taona.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali nenty nitranga in-1 : Basy kalachnikov roa, Mas 36 miisa roa ary basim-borona 12 no nentin'ireo mpanafika. Tapatapany delicious nitranga in-4 : Mpanoratra Sana Saleem · Nandika Mamisoa · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra 0 Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper.
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina voararan' nitranga in-1 : Tao amin'ny pejy Facebookn'ny Viet Tan Viet Tanis vondrona politika mpanohitra miorina ao Etazonia izay voararan'ny governemanta kaomonista Vietnamiana. Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy buzz nitranga in-1 : Mpisera iray ety anaty aterineto no naneho hevitra [zh] tamim-panesoana tao amin'ny twitter hoe: 突然发现最有艺术炒作能力的还是中共。李承鹏本来很一般的售书活动，被中共一加工，就成了全世界都知道的行为艺术了。 Tampoka teo dia nahita ny Antoko Kaominista namadika buzz horakoraka iray ho lasa taokanto aho.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Alamdar nitranga in-1 : Taorian'ny elanelan'ora fohy fotsiny, niatrika vono olona hafa indray ny tao amin'ny Làlana Alamdar, sisintany be mponina Shiita Hazara indrindra, mbola tetikady tahaka ilay fipoahana tamin'ny maraina ihany no nampiasaina tamin'izany.
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila nandranto nitranga in-1 : Tao amin'ny sekoly tsy miankina iray teto an-drenivohitra no nandranto fianarana mitantana na «management» Andrianary Nirisoa Yvette. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila hanakanana nitranga in-1 : Ny voalohany dia na dia teo aza ny fanentanana olona marobe nataonareo sy ny ezaka hanakanana ahy tsy hivoaka ny trano. Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Nong nitranga in-1 : Nong Hung Anh 5 taona an-tranomaizina, 3 taona ambenana an-trano Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali nahita nitranga in-2 : zon'ny ankizy no arovana manoloana ny karazana herisetra mety hianjady amin'izy ireo Nitolagaga i Marie Darmayan, talen'ny fikambanana Ecpat France eto Madagasikara, nahita ny endriky ny fizahantany mamoafady ao Nosy-Be.
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Nihamafy nitranga in-1 : Nihamafy anefa ny toe-draharaha ny sabotsy lasa teo. Lalao finday — Nitombo ny mpanapitrisa tanàna nitranga in-1 : Antoandro araka ny fantatra no nanafihan'ireo olon-dratsy ilay tanàna tao Ambohitranakova-Ambatonan-driana. Ihadilalana Ambositra — Dahalo 21 nirongo basy am-polony nandravarava nanatontosa nitranga in-1 : Heverina hatreto fa iray ihany ny andian-jiolahy nanatontosa ireo fanafihana ireo. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina karohan' nitranga in-1 : Mbola karohan'ireo mpitandro ny filaminana anefa ny vehivavy mpitarika ity fidinana an-dalambe ity izay voalaza fa tsy nisehoseho tamin'io sabotsy io.
Tsy afa-niasa ny « QMM » Taolagnaro — 11 ireo voasambotra, mpitandro ny filaminana efatra naratra hanimba nitranga in-1 : Ny faharoa dia nampiasa fomba ratsy sy maloto te hanimba ny fanahiko sy hampitahotra ahy ianareo, mba hahatonga ahy hiala amin'ny zavatra ataoko. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila ninia nitranga in-1 : «Tsy afaka hanery azy ireo hanome na hanampy antsika amin'ny fanatontosana ny fifidianana isika, misy ny mety hanome, misy koa anefa ireo tsy hanome mihitsy», hoy ihany ny Filohan'ny tetezamita izay ninia tsy nety naneho hevitra momba ny soson-kevitry ny vondrona Sadc.
Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc Betsiboka nitranga in-2 : nataon'ny FTM tsy nisotro rano i Betsiboka, omaly tetsy Malacam Tsy tafavoaka. Tapatapany école nitranga in-1 : Ny zavatra nahafinaritra ahy indrindra kosa tany amin'ny fiofananay dia ilay midina amin'ny tady amin'ny école des rochets, tany Tongafeno», hoy ity manamboninahitra zandary vehivavy malagasy voalohany ity.
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila Quetta nitranga in-9 : olona 82 no namoy ny ainy nandritra ny daroka baomba namely faritra iray be mponina indrindra ahitana foko Miozolomana Shiita Hazara, tao an-tanàna Atsimo-Andrefan'i Quetta, tamin'ny 10 Janoary Sombiny taty nitranga in-1 : «Nisy mihitsy no natahotra hoe sao tsy ho vitako izany fa taty aoriana niaiky daholo ihany», hoy ihany izy. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila vitako nitranga in-2 : «Nisy mihitsy no natahotra hoe sao tsy ho vitako izany fa taty aoriana niaiky daholo ihany», hoy ihany izy.
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila manifestation nitranga in-1 : atoa Bill no mitatitra ao amin'ny gazety Madagascar Tribune ny rotaka izay nanery ny fitsaharanasa tao amin'ny orinasa QMM any Taolagñaro [fr] nanomboka tamin'ny Alakamisy faha Janoary lasa teo: les activités de la société QMM qui extraie l'ilménite à Fort Dauphin sont depuis ce jeudi 10 janvier fortement perturbées par une manifestation de foule. Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Faisal nitranga in-1 : Hoy koa ilay mpanao gazety hajaina Mohammad Hanif nanoratra: mohammedhanif: toa tahaka ny efa akaiky ny fankasitrahana eto, fa ny fiantsona ny fanafihana antokom-pivavahana, ho fanafihana antokom-pivavahana no tena anton'ny fanafihana antokom-pivavahana zainabimam: Tsara, Faisal Qureshi mpilalao tamin'ny seho maraina amin'ny antsipirihany mikasika ny fahitan'ny Shiita ny finoana.
Lalao finday — Nitombo ny mpanapitrisa notifiry nitranga in-1 : Maty notifirin'ireo jiolahy mihitsy ilay lehilahy izay voalaza fa vao avy nahalafo fiara tamin'io, ka antony nahatonga an'ilay fanafihana. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Bilaogera nitranga in-2 : Pakistan adyadeel: Tokony hifarana ny ShiaGenocide fandripahana ny Shiita , tokony handray fepetra azo tsapain-tanana ny governemanta mba hanehoany fa te-hanavotra marina ny fiainan'ireo Shiita tsy manan-tsiny izy Bilaogera Omar Biden nanoratra lahatsoratra fohy na fanomezam-boninahitra mampihetsi-po ho an'i Irfan Khudi Ali tao amin'ny bilaoginy: Andro iray tamin'ireo andro marobe nihoson-drà ny omaly tao an-drenivohitr'i Balochistan, Quetta.
Sombiny Saleem nitranga in-1 : Mpanoratra Sana Saleem · Nandika Mamisoa · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra 0 Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper.
Fiainam-pirenena sy politika – Miseho lany ny aretina Alzheimer eto amintsika
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila Fitaratsara nitranga in-1 : Resin'ny klioban'ny Totoafo tamin'ny isa 3 no ho 2 koa Fitaratsara, avy aty an-drenivohitra. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila nisioka nitranga in-1 : Maria Memon nisioka hoe: Namoy ny ainy i Ali tamin'ny fipoahan'ny baomba faharoa androany alina. Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali hanoratra nitranga in-1 : Na dia mbola te hanoratra ny fihetseham-poko aza aho, tsy vitako intsony ny mamarana ity lahatsoratra ity… Tsy vao voalohany amin'ny tranga tahaka izao ny andron'ny rà mandriaka ao Quetta, araka ny filazan'i Omar, ary mety tsy ho farany ihany koa.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Tran nitranga in-1 : Tran Minh Nhat 4 taona an-tranomaizina, 3 taona ambenana an-trano Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy politikany nitranga in-1 : Sary avy amin'i Viet Tan Rupert Colville ao amin'ny Biraon'ny Firenena Mikambana Filan-kevitra Ambony misahana ny fiarovana ny Zon'Olombelona nandrisika ny amin'ny hanovana ny fehezan-dalàna famaizana ao Vietnam: Mandrisika ny governemantan'i Vietnam izahay mba hanova ny fampiharana ny fehezan-dalàna famaizana mikasika ny fanagadrana ireo olona izay mitsikera ny politikany, ary hanova ihany koa ireo tranga mitovy amin'izany tahaka ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana sy ny zo hamory va Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Thay nitranga in-1 : Thai Van Dung 5 taona an-tranomaizina, 3 taona ambenana an-trano Tapatapany Rasoloarison nitranga in-1 : Monica Rasoloarison.
Tapatapany Hanenjika nitranga in-1 : Hanenjika an-dRemenabila Taorian'ny nivoahany ny sekoly ny taona dia nampianatra tany amin'ny sekolin'ny zandarimariam-pirenena tany Ambositra ny Lietnà Yvette. Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali taminà nitranga in-1 : Nitondra sarontava iray i Li ary nanasonia ny bokiny taminà datin'andro diso.
Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc Sonita nitranga in-1 : Nahatezitra ny maro ny tsy firaharahiana, indrindra hatramin'ny nanakanana ny fikambanana Sonita mahery fihetsika Lashkar-e-Jhangvi izay nanao ny fanafihana ka mbola tsy tratra hatramin'izao. Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali nanambara nitranga in-1 : RIPKhudiAli Nandà tsy handevina ireo havany maty ny fianakaviana ary nanambara fa hanohy hanao sit-in izy ireo raha tsy mandray andraikitra haingana manoloana ny vono-olona ny tafika.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Hoang nitranga in-1 : Nandritra izany, nitantara ny fanorisorenana ara-nofo nataon'ireo polisy azy ilay bilaogera vavy Nguyen Hoang Vi raha nanangom-baovao ny fotoa-pitsarana ireo bilaogera telo notsoraina tamin'ny 28 Desambra lasa teo: Faly be aho androany milaza fandresena roa aminareo. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila kalachnikov nitranga in-1 : Basy kalachnikov roa, Mas 36 miisa roa ary basim-borona 12 no nentin'ireo mpanafika. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Nety nitranga in-1 : Nety tamiko rahateo ilay mason-tsivana hidirana tany.
Lalao finday — Nitombo ny mpanapitrisa nihamafy nitranga in-1 : Teo amin'ny tamin'ny 11 ora antoandro no nihamafy ny hetsika satria saika hodoran'izy ireo hatramin'ny trano fonenan'ireo mpiasan'ny Qmm, ka tsy maintsy nosakanana. Fiainan-tokantrano France nitranga in-2 : zon'ny ankizy no arovana manoloana ny karazana herisetra mety hianjady amin'izy ireo Nitolagaga i Marie Darmayan, talen'ny fikambanana Ecpat France eto Madagasikara, nahita ny endriky ny fizahantany mamoafady ao Nosy-Be. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Rakikira nitranga in-1 : Rakikira voalohany, izay nokotrehin'ny tarika tao anatin'ny dimy taona.
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Oanh nitranga in-1 : Ho Van Oanh 3 taona an-tranomaizina, 2 taona ambenana an-trano 7. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina nivoahany nitranga in-1 : Hanenjika an-dRemenabila Taorian'ny nivoahany ny sekoly ny taona dia nampianatra tany amin'ny sekolin'ny zandarimariam-pirenena tany Ambositra ny Lietnà Yvette. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Zon' nitranga in-3 : Nihetsika avy hatrany ireo fikambanana mpiaro ny Zon'Olombelona raha nahare ny vaovao ka nitaky ny famotsorana ireo bilaogera voampanga.
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila Totoafo nitranga in-5 : rakotomalala Nandrasantsoa Jérémie, mpiandry tsatokazon'ny ekipan'i Totoafo avy ao Tsarahonenana Tafakatra hiady ny lalao famaranana, izay hatao ny alahady izao ao amin'ny kianja Manampisoa, ny klioban- dRemenabila sy ny klioban'ny Totoafo, samy avy ao Tsarahonenana.
Lalao finday — Nitombo ny mpanapitrisa Dang nitranga in-4 : Dang Xuan Dieu 13 taona an-tranomaizina, 5 taona ambenana an-trano 3.
Women's Day Dancing Ambilobe 2020 - Antakarana \_u0026 Toliara - Madagascar
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina nivoahana nitranga in-1 : Taorian'ny nivoahana tany amin'ny Akademia Miaramila dia mianatra foana aloha izao no ataonay. Tapatapany reddit nitranga in-4 : Mpanoratra Sana Saleem · Nandika Mamisoa · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra 0 Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper.
Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy ifampitadiavana nitranga in-1 : Mbola ifampitadiavana kosa ireo basy mahery vaika izay nampiasaina tamin'ity fanafihana ity. Lalao finday — Nitombo ny mpanapitrisa hampiato nitranga in-1 : Miantso ireo manampahefana izahay mba hampiato izao fanamelohana izao ary hamotsotra ireo mpanao gazety rehetra miatrika fitsarana noho ny fiampangana diso azy ireo mikasika ny fiarovam-pirenena. Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy tsanganasa nitranga in-1 : Ny fanaovan-tsonia ny bokin'i Li Chengpeng dia hetsika tsotra kely monja ihany, saingy taorian'ny nikirakiran'ny Antoko Kaominista azy ity, dia nanjary tsanganasa iray toy ny seho an-tsehatra izay niely maneran-tany ilay izy.
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Qureshy nitranga in-1 : Hoy koa ilay mpanao gazety hajaina Mohammad Hanif nanoratra: mohammedhanif: toa tahaka ny efa akaiky ny fankasitrahana eto, fa ny fiantsona ny fanafihana antokom-pivavahana, ho fanafihana antokom-pivavahana no tena anton'ny fanafihana antokom-pivavahana zainabimam: Tsara, Faisal Qureshi mpilalao tamin'ny seho maraina amin'ny antsipirihany mikasika ny fahitan'ny Shiita ny finoana.
Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy milisy nitranga in-1 : Nanomboka tamin'ny taona , ireo Miozolomana Shiita Hazara ao Quetta foana no kinendrin'ireo vondrona milisy. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Razakaboana nitranga in-1 : Niampy medaly alimo roa, tamin'ny alalan'i Randy sy Océane Razakaboana, izany vokatra izany teo amin'ny olon-tokana, sokajy latsaky ny 14 taona sy 16 taona vehivavy.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali marobe nitranga in-3 : Pakistan adyadeel: Tokony hifarana ny ShiaGenocide fandripahana ny Shiita , tokony handray fepetra azo tsapain-tanana ny governemanta mba hanehoany fa te-hanavotra marina ny fiainan'ireo Shiita tsy manan-tsiny izy Bilaogera Omar Biden nanoratra lahatsoratra fohy na fanomezam-boninahitra mampihetsi-po ho an'i Irfan Khudi Ali tao amin'ny bilaoginy: Andro iray tamin'ireo andro marobe nihoson-drà ny omaly tao an-drenivohitr'i Balochistan, Quetta.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali Làlana nitranga in-1 : Taorian'ny elanelan'ora fohy fotsiny, niatrika vono olona hafa indray ny tao amin'ny Làlana Alamdar, sisintany be mponina Shiita Hazara indrindra, mbola tetikady tahaka ilay fipoahana tamin'ny maraina ihany no nampiasaina tamin'izany. Tapatapany natahotra nitranga in-3 : «Nisy mihitsy no natahotra hoe sao tsy ho vitako izany fa taty aoriana niaiky daholo ihany», hoy ihany izy. Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila natomboky nitranga in-1 : Hanohy ny ady izay efa natomboky ny fikambanana Groupe Dévéloppement ny Ecpat France amin'ity taona ity.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali voakasik' nitranga in-1 : Ireo zaza tsy ampy taona no maro voakasik'ity fizahantany sazian'ny lalàna ity ao an-toerana. Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina ekipan' nitranga in-2 : rakotomalala Nandrasantsoa Jérémie, mpiandry tsatokazon'ny ekipan'i Totoafo avy ao Tsarahonenana Tafakatra hiady ny lalao famaranana, izay hatao ny alahady izao ao amin'ny kianja Manampisoa, ny klioban- dRemenabila sy ny klioban'ny Totoafo, samy avy ao Tsarahonenana.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali nitranga in-1 : Araka ny tarehimarika voalazan'ny habaka, Shiita Hazara no efa namoy ny ainy tao Pakistan nanomboka ny taona Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy Miozolomana nitranga in-4 : olona 82 no namoy ny ainy nandritra ny daroka baomba namely faritra iray be mponina indrindra ahitana foko Miozolomana Shiita Hazara, tao an-tanàna Atsimo-Andrefan'i Quetta, tamin'ny 10 Janoary Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali nosakanana nitranga in-1 : Teo amin'ny tamin'ny 11 ora antoandro no nihamafy ny hetsika satria saika hodoran'izy ireo hatramin'ny trano fonenan'ireo mpiasan'ny Qmm, ka tsy maintsy nosakanana.
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Sekrima nitranga in-2 : Ho fampivoarana ny miralenta indrindra no antom-pisian'ny atrikasa nampiharana ny drafitrasa kaonfederaly notontosain'ny Sekrima nandritra ny roa andro, nifarana ny sabotsy teo. Tsy afa-niasa ny « QMM » Taolagnaro — 11 ireo voasambotra, mpitandro ny filaminana efatra naratra nanjary nitranga in-2 : Natokan'i Ali tamin'ny fanasongadinana ny mafy mahazo ireo Hazara ny ankamaroan'ny fiainany, ho an'ireo izay mahafantatra azy na ireo tsy mahafantatra azy, nanjary modelin'ny tolona ho amin'ny rariny ho an'ny Fiarahamonina Hazara ao Pakistan izy.
Fiainan-tokantrano tenifahatra nitranga in-1 : Tamin'ny ezaka hidradradradrana ny zava-misy sy ny fanerena natao tamin'ireo tompon'andraikitry ny fampiharana ny lalàna sy ny governemanta, adihevitra mafana no niseho tao amin'ny media sosialy izay mikasika ny fikendrena hamono ireo Shiita, nampiasaina tamin'izany ny tenifahatra shiakillings sy ny shiagenocide tao amin'ny Twitter.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali avylavitra nitranga in-1 : Mpanoratra Abby · Nandika avylavitra · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra 0 Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. Tapatapany nahatohitra nitranga in-1 : Taorian'io dia tsy nahatohitra an'Ihorombe, izay ekipa nataon'ny rehetra fakana isa tamin'ny taon-dasa, ny solon- tenan'ny ligin'Atsinanana.
Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy inoan' nitranga in-1 : Raha ny maro amin'ireo mpampiasa ny Weibo no mihevitra ny fanaraha-maso hetsika madinika toy izany fanaovan-sonia izany ho toy ny hadalàna, dia inoan'izy ireo kosa fa ilay hetsika fanaovan-tsonia natao am-pahanginana dia efa maneho ny fikorontanan-tsain'ny governemanta. Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc ohatran' nitranga in-1 : Toy izao ny fitantarany ny antony nanosika azy hanao zandary: «Nahita ireny horonantsary amin'ny fahitalavitra ireny aho dia voasarika hoe ohatran'ny mba tsara kosa izany vehivavy manao ny asan'ny mpitandro ny filaminana izany.
Tapatapany nitafa nitranga in-1 : Na nilaza ho « «afa-po tamin'ny fifampidinihana tany an-toerana» aza ny mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona dia hita ho malomaloka endrika ihany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Ivato io. Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc atrikasa nitranga in-1 : Ho fampivoarana ny miralenta indrindra no antom-pisian'ny atrikasa nampiharana ny drafitrasa kaonfederaly notontosain'ny Sekrima nandritra ny roa andro, nifarana ny sabotsy teo.
Lalao finday — Nitombo ny mpanapitrisa fusil nitranga in-1 : Tokantrano iray no notafihin'ireo jiolahy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny « fusil à pompe » teny Ankadikely-Ilafy, ny zoma 11 janoary tokony tamin'ny 1 ora maraina. Sombiny natao nitranga in-3 : Tamin'ny ezaka hidradradradrana ny zava-misy sy ny fanerena natao tamin'ireo tompon'andraikitry ny fampiharana ny lalàna sy ny governemanta, adihevitra mafana no niseho tao amin'ny media sosialy izay mikasika ny fikendrena hamono ireo Shiita, nampiasaina tamin'izany ny tenifahatra shiakillings sy ny shiagenocide tao amin'ny Twitter.
Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina Nampiasa nitranga in-1 : Nampiasa ny media sosialy ireo mpikatroka Hazara taloha mba hisarika ny sain'ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena hitantara sy hitatitra ny zava-misy.
Fiainam-pirenena sy politika – Miseho lany ny aretina Alzheimer eto amintsika | NY VALOSOA VAOVAO
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali hirotsahan' nitranga in-1 : Tsilian-tsofina no nahenoana fa «ny famerenana an'ilay soson-kevitra mahakasika ny tokony samy hirotsahan'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana Filoham-pirenena no nataon'ireo Filoham-pirenena mpitarika ny vondrona Sadc» tamin'ity fihaonana tany Dar es Salaam ity.
Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc nijery nitranga in-1 : Nahavory olona an-jatony maro ny kianjan'i Manampisoa, eny Tsarahonenana, kaominina Masindray, Avaradrano, nijery ny fiadiana ny lalao manasa-dalana eo amin' ny baolina kitra lalaovin'olona sivy, omaly tolakandro, ka nitorajofo fa tsara ny andro. Sombiny ankinafinafina nitranga in-1 : Tsy misy ankinafinafina, tsy misy henatra fa toa efa mandeha ho azy mihitsy. Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc noeritreretiko nitranga in-1 : «Tsy dia noeritreretiko loatra aloha ilay ho lasa zandary.
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila Shiita nitranga in : olona 82 no namoy ny ainy nandritra ny daroka baomba namely faritra iray be mponina indrindra ahitana foko Miozolomana Shiita Hazara, tao an-tanàna Atsimo-Andrefan'i Quetta, tamin'ny 10 Janoary Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali lalàna nitranga in-3 : Ireo zaza tsy ampy taona no maro voakasik'ity fizahantany sazian'ny lalàna ity ao an-toerana. Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali International nitranga in-1 : Sary avy amin'i Viet Tan Rupert Colville ao amin'ny Biraon'ny Firenena Mikambana Filan-kevitra Ambony misahana ny fiarovana ny Zon'Olombelona nandrisika ny amin'ny hanovana ny fehezan-dalàna famaizana ao Vietnam: Mandrisika ny governemantan'i Vietnam izahay mba hanova ny fampiharana ny fehezan-dalàna famaizana mikasika ny fanagadrana ireo olona izay mitsikera ny politikany, ary hanova ihany koa ireo tranga mitovy amin'izany tahaka ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana sy ny zo hamory va Sombiny Grobler nitranga in-1 : Ny masoivohon'i Afrika Atsimo miasa eto amintsika, Gert Grobler rahateo teny amin'ny lapan'Iavoloha dia efa nanamafy ny amin'ny tokony hampiharana an'io soson-kevitra io, raha toa ka mihevitra ny ho kandidà samirery amin'io fifidianana io ny mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona.
Tapatapany ankilan' nitranga in-1 : Ny mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Ravalomanana, Mamy Rakotoarivelo indray tetsy ankilan'izay dia nilaza ny «mbola hiandry ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny Sadc fa hanambara ny heviny». Fifidianana filoham-pirenena — Tsy hanaiky ny haha kandidà samirery an-dRajoelina ny Sadc Namoaka nitranga in-1 : Namoaka ity fanambarana ity izy ireo tamin'ny andro nanaovana ny fitsarana: Nikely aina niaro ny fahamarinana ara-tsosialy, nazoto tamin'ny asa fanaovan-gazety an'olo-tsotra sy nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana milamina manohitra ny fanitsakitsahan'ny shinoa ny sisintaniny ireo mpikatroka, izay mbola 20 taona na 30 taona ny ankamaroany.
Zandary vehivavy — Vonona hanenjika an-dRemenabila tetikady nitranga in-1 : Taorian'ny elanelan'ora fohy fotsiny, niatrika vono olona hafa indray ny tao amin'ny Làlana Alamdar, sisintany be mponina Shiita Hazara indrindra, mbola tetikady tahaka ilay fipoahana tamin'ny maraina ihany no nampiasaina tamin'izany. Ihadilalana Ambositra — Dahalo 21 nirongo basy am-polony nandravarava narakitra nitranga in-1 : Mampiseho ireo Hazara an'arivony mipetraka anaty orana miaraka amin'ireo vatana mangatsiaka lavo nandritra ny daroka baomba tao Quetta ity sary narakitra tao amin'ny Twitter ity.
Ny Tantarako - Tapitra Ny Azo Nianarana Teto Madagasikara (Tome 2).
tranonkala mampiaraka ho anny tanàna ao Antsirabe Madagaskar.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali sisintaniny nitranga in-1 : Namoaka ity fanambarana ity izy ireo tamin'ny andro nanaovana ny fitsarana: Nikely aina niaro ny fahamarinana ara-tsosialy, nazoto tamin'ny asa fanaovan-gazety an'olo-tsotra sy nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana milamina manohitra ny fanitsakitsahan'ny shinoa ny sisintaniny ireo mpikatroka, izay mbola 20 taona na 30 taona ny ankamaroany. Madagasikara: mpiasa n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy anisany nitranga in-1 : Ary anisany namoy ny ainy tamin'izany, ny namana mahafinaritra, mpikatroka ny zon'Olombelona —Irfan Ali Khudi.
Namoy ny Ainy Noho Ny Daroka Baomba Mikendry Ny Hazara Ilay Mpikatroka Pakistaney Khudi Ali David nitranga in-1 : Horonantsary faharoa ny «La photographie», an'i David Randriamanana, izay ao anatin'ny sokajin' ireo horonantsary nofinofy.
Related mihantona mody Tuliara Madagaskar
Fifanarahana eo aminny razana ao Tuamasina Madagaskar
Mampiaraka Antsirabe Madagaskar
Mampiaraka kristianina maimaimpoana Madagaskar
Serivisy fanaovana lalao any Madagaskar
Haingana ny mampiaraka haingana Antsirabe Madagaskar
Nosy daty ao Tuliara Madagaskar